တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဗိုလ်လုပ်လိုသလား (၃)
Thanks for this post MaMay.
I wanna be Bo.
sometimes I am lazy to worship before bedtime.
ဗိုလ်ထဲမှာမှ ဗိုလ် ငါးမျိုး။ အဲဒီအပြင် သဒ္ဓါဗိုလ်မှာကလဲ အမျိုးကွဲတွေ ရှိနေသေးတော့ ဗိုလ် ဆိုတာ တယ်လဲ အမျိုးများလှပါလားလို့ လျှောက်တွေးမိတယ်။ သဒ္ဓါတရားကို မွေးမြူနည်း ဥပမာကို သဘောကျမိတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော် ဘုရားရှိမခိုးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာနေပြီ။ တခါတခါတော့လဲ ပုဆိန်ပေါက် ရှိခိုးမိပါရဲ့။ အခု ရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး သဒ္ဓါတရားကို မွေးမြူကြည့်လိုက်အုံးမလားဘဲ။ ဗိုလ်လုပ်ချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ :D
6/28/2007 3:08 AM
No No I Dont wanna be Bo!
I just wanna be General! oh not enough ! Senior General ! he he.
Just Joke ama! :)